शाहबंशको कूल मन्दिर आलमदेवीः जहाँ नवमीका दिन सरकारी पञ्चबली चढाइन्छ ! « News24 : Premium News Channel
शाहबंशको कूल मन्दिर आलमदेवीः जहाँ नवमीका दिन सरकारी पञ्चबली चढाइन्छ !
बुटवल, १ कात्तिक । नेपालका शक्तिपीठहरुमध्ये बेग्लै विशेषता र पहिचान बोकेको स्याङ्जाको आलमदेवी मन्दिरमा दशैंको नवमीका दिन वर्षभरीकै सबैभन्दा ठूलो विशेष पूजा र सरकारी पञ्चबलि चढाउने प्रचलन छ ।
बि.सं.१३५० सालमा स्थापना भएको यो मन्दिर शाह बंशको कूल देवता र कूल मन्दिर मानिदै आएको छ । कालिगण्डकी गाउपालिका वडा नंं ३ आलम देवीमा रहेको यो आलम देवी मन्दिरमा नवमीका दिन बिहानै डेढ घण्टा लामो यज्ञ र नव दुर्गाको पूजापछि पञ्चबली गरिन्छ । आजैका दिन महिषासुरलाई देवीले बध गरेको दिन मानिएकाले नवदुर्गाको पूजा र यज्ञपछि ठूलो राँगोसहित सरकारी पञ्चबली दिइन्छ ।
मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सदस्य दीपक घलेका अनुसार आलमदेवीमा राँगो, बाख्राको पाठो, कुखुरा, परेवा र भेँडालाई बली चढाउने परम्परा छ । भेँडा उपलब्ध नहुँदा कुभिण्डो प्रयोग गरिन्छ । नवमी दिन करिब ५ हजार भक्तजनहरु आउने घलेले बताए ।
दर्शनार्थीको भीड लाग्ने भएकाले नवमीका दिन दिउंसो अबेरसम्म पूजा र बली चढान्छ । पञ्चबली चढाउन सरकारी निकायबाट बजेट व्यवस्था हुँदै आएको छ । यसपटक पनि गुठी संस्थानले ८४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको घलेले बताए । धेरै वर्षपहिला शाह बंशीय राजाहरुले राँगो छोडिदिने र त्यो राँगो आफै आलमदेवी आइपुग्ने र स्थानीयले बली चढाउने गरेको इतिहास रहेको बताइन्छ । तर पछि रांगो छोड्न छाडेर गुठी संस्थानमार्फत बजेट दिएर पञ्चबली चढाउने परम्परा शुरु भएको हो ।
नवमीका दिन आलमदेवीमा बली चढाउनेको निकै भीडभाड हुने गर्छ । सरकारी पञ्चबलीपछि मात्र मन्दिर भक्तजनका लागि खुला गरिने र सर्वसाधारणले ल्याएका पशुपंक्षीको बली दिने गरिन्छ । जीवनमा ठूलो संकट आइलागेपछि वा आउने संभावना देखेपछि यहाँ आएर आलमदेवीसँग बर मागेपछि संकट मोचन हुने जनविश्वास रहिआएको छ ।
भारतको चितौरगढका चन्द्र बंशावली भट्टारक राजा ऋषी राणाजीको राज्यमा मुगलले आक्रमण गरेपछि पूर्व तिर गए कूल र सन्तान सुरक्षित हुन्छन् भन्ने सल्लाहका आधारमा राजपरिवार पश्चिम नेपाल हुँदै स्याङ्जाको आलम देवीको अग्लो डाँडोमा आएका जनस्रुति रहेको छ । सोही डाँडोमा मन्दिर बनाई उनीहरुले मुर्ती राखेको र पछि उक्त मुर्ती अलाप भएको हुंदा कालान्तरमा आलमदेवी नामाकरण भएको मानिन्छ ।
भारतीय ऋषी राणाका छोराहरु मिञ्चा खाँण र खाञ्चा खाणमध्ये एकजनाले स्याङ्जाको नुवाकोटमा र अर्काले कास्कीकोट, तनहुँ हुँदै गोर्खासम्म राजा भएर राज्य गरेका र तिनै खाँणले पछि थर परिवर्तन गरि शाह लेखाउन थालेको किंवदन्ती छ । हालको नेपालको शाह बंश तिनै चितौरगढका चन्द्र बंशावली भट्टारक राजाका सन्तान हुन् भन्ने वालिंग नगरपालिकाका मेयर दिलिपप्रताप खाणले लेखेको पुस्तकमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ ।
आलमदेवी मन्दिरको विशेषता मध्ये यो मन्दिरको फेदलाई संसारकै पवित्र मानिने कालिगण्डकी नदीले चारैतिरबाट घरेको छ भने मन्दिरमा छाना छैन । बेलाबेलामा मन्दिरभित्रबाट ज्वाला निस्कने भएकाले मन्दिरमा छाना नराखिएको दावी छ । यो मन्दिरलाई ज्वालामाई देवीको मन्दिरका रुपमा पनि चित्रण गरिन्छ ।
अर्को कुरा यो मन्दिरमा मुर्ती छैनन्, मुर्ती रहने ठाउँमा भिमसेन पाती नामको मझौला रुख छ । यो रुख सय वर्ष भन्दा अगाडिदेखि जस्ताको त्यस्तै रहेको स्थानीय बताउँछन् । यो मन्दिरमा उमरा राना मगर जातका चुडाकर्म गरेका १५ वर्षमुनिका किशोर मात्रै पुजारी बन्न पाउँछन् । उनीहरुले कालीगण्डकी नदीमै नुहाएर आएर मात्र पुजा गर्छन् । मन्दिर पुग्न जुनसुकै दिशाबाट जाँदा पनि उकालो चढ्नैपर्छ ।
मन्दिरमा ३६५ दिन नै पुजा हुने र पूजा हुँदा नगरा बनाउने परम्परा छ । एकादशी, औंशी, साउन १ देखि नागपञ्चमी र १६ श्राद्धमा बाहेक अरु सबै दिन यहाँ बली चढाइन्छ । मन्दिर भित्र महिलाको हकमा ठकुरी जातका महिला मात्र जान पाउँछन् ।
यहां वर माग्न, भाकल गर्न र पूजा गर्न नेपालका अधिकांश जिल्लाका साथै भारतबाट समेत भक्तजन र दर्शनार्थीहरु आउने गर्छन् । विशेषगरी ठकुरी वंश, सेना, प्रहरीका जागिरेहरुको यो मन्दिरप्रति आस्था र विश्वास रहेको छ । यहाँ चैते दशैं, र न्वागीमा पनि विशेष पूजा र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु हुने गर्छन् ।
मन्दिर रहेका बस्तीमा खानेपानीको चर्को समस्या छ । मन्दिरसम्म पुग्ने सडक पनि निकै साँघुरो र कच्ची भएकाले इच्छुक सबै दर्शनार्थीहरु सहजरुपमा पुग्न नसकेको अवस्था छ । यो मन्दिर दर्शन गर्न बेलाबेलामा पुर्व राजपरिवारका सदस्यहरु जाने गर्छन् । गत वर्षमात्रै पुर्व युवराज्ञी हिमानी शाह मन्दिर दर्शन गर्न पुगेकी थिइन् ।
मन्दिरमा आउने भक्तजनलाई बास बस्नका लागि सय जना अट्ने अतिथि गृह निर्माण भइरहेको र खानेपानीको व्यवस्थाका लागि पहल भइरहेको अधयक्ष राना बताउँछन् । यसै वर्ष आलमदेवी मन्दिरको नाममा हुलाक टिकट पनि प्रकाशित हुंदैछ ।
सडक पीच, खानेपानी र टेलिफोन सेवाको उचित व्यवस्था हुन सके यो मन्दिर क्षेत्र धार्मिक मात्र नभई पर्यटकीय हिसाबले पनि विकास गर्न सकिने स्थानीय बुद्धिजिवी दीपक घले बताउँछन् ।